Nlụpụta Smart - Ningbo Runner Co., Ltd.
UNLỌ AKWODKWỌ AKW RKWỌ
Na usoro nke ihe nhazi, metal anwụ-mgbatị & zọ, n'elu ọgwụgwọ, nzukọ na nkwakọ, Ningbo-agba ọsọ nke nwetara elu akpaaka na kpụrụ a na-usoro layout. Maka ikpuchi njikọ ọ bụla nke atụmatụ mmelite ahụ, ngalaba RIT (Runner Improve Team) na-arụ ọrụ mmezi na usoro obe ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, ọ wuru usoro njikwa ya Runner Production System (RPS) maka njirimara RUNNER na ihe mgbaru ọsọ nke "elu arụmọrụ, elu àgwà na ọgụgụ isi" site usoro njikarịcha na ọgụgụ isi mgbanwe.
01 PLB PLRAT ATLỌ
Ningbo-agba ọsọ na-agba mbọ ka nnyocha nke plastic ịkpụzi ngwá na usoro akara. Ọ na-enye onwe ha ngwọta maka ebu imewe, anwụ na-akpụ akpụ na elu ọgwụgwọ technology na zuru-akpaka mmepụta nke atọ n'aka ígwè (ladlers, sprayers na extractors), multi-ojii na-aga n'ihu mmepụta na-abụghị ndị na-emegiderịta-aga n'ihu mmepụta, ọbọ unmanned na akpaghị aka na-arụ ọrụ nke ọma ma dị nso na ọnọdụ imepụta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe 3.0.
02 MGBE AHUR AHUR
Ọ nwere ike ịghọta obere ogbe, ịgbasa na imepụta ihe n'otu oge.
Elu nke mkpuchi ahụ nwere nchekwa dị mma, agba siri ike, na-adịte aka, antibacterial, mgbochi nsị na nhicha dị mfe, akara mkpịsị aka na ọrụ ndị ọzọ. The ụlọ ọrụ nwere ike na-aghọta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nchebe gburugburu ebe obibi, na mmiri mmiri na-eru nso efu emission.
03 KWES SELRF KWESFRF KWESFRF ANDLỌ NA-EGO
Ningbo agba ọsọ nwere ájá-free nzukọ ogbako na-eji elu akpaka na ọkara akpaka akụrụngwa maka nkwakọ na nzukọ iji ghọta irè Nchikota nke manpower na ígwè. Ka ọ dị ugbu a, Weilin nwere ike ịmepụta ngwa ọrụ na ihe ndozi ma jikọta R&D, imewe, imepụta, mgbakọ na nnwale nke ngwa ọrụ na ihe ndozi na otu.
Independent nnyocha na mmepe nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ihe
Independent nnyocha na mmepe nke nwere ọgụgụ isi ịkpụzi technology
Independent nnyocha na mmepe nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ elu ọgwụgwọ technology